Sheekh Abuu Usaama: “Allaah Ayaa Nagu Guuleeyay Inaan Xirno Meelo Badan oo Uu Wabigu Ka Fatahay” (Wareysi) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Sheekh Abuu Usaama: “Allaah Ayaa Nagu Guuleeyay Inaan Xirno Meelo Badan oo Uu Wabigu Ka Fatahay” (Wareysi)
Last updated May 9, 2018 184 0
Ugu horreyn waxa uu sheegay in guud ahaan gobolka uu si wcan uga da’ay roobka guga, wabiguna uu si heer sare ah u biyo keenay iyadoo la rajeynayo in sidii hore si ka badan looga faa’iideysto wax soo saarka.
Sheekha ayaa waxa uu intaasi ku daray in ay jiraan dhowr meel oo uu wabigu ka sameeyay fatahaad, ugu dambeyntiina uu Allaah, ku guuleysiiyay iney awdaan oo ay xiraan karkaarradi ay biyuhu soo goosteen.
Iminka wuxuu sheegay iney xaaladdu aad u wanaagsan tahay Allaahna ay ka baryayaan inuu dadka muslimiinta ah ka hayo masaa’ibta.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in roobkan guga uu kusoo hagaagay iyadoo bulshadu kasoo kabatay abaartii sannadkii hore kadib markii ay deyrtii lasoo dhaafay ay intooda badan u soo go’een dalagyo badan oo ay beerteen, halka haatanna ay ku mashquulsan yihiin tacabka.
Intaasi kadib, waxa uu sheegay in ay dadaal badan ku bixiyeen horumarinta adeegga bulshada iyo mashaariic kale. Wuxuu sheegay iney kordhiyeen goobaha caafimaadka ee sida lacag la’aanta ah dadka loogu daweeyo, sidoo kalana ay fureen MCH-yo badan si loo daboolo inta la awoodo baahida caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka.
Intaas waa qeybta kowaad ee wareysiga, waxaana jira qeybo kale oo uu uga hadlayo arrimo muhim ah, halkan ayaadna kala socon doontaan insha’allah.
Halkan Ka Degso Qeybta 1-aad Ee Wareysiga